Famoahana malaza - ny fiandohany sy ny heviny
Sayings | Teny idiom
Ny voany sy ny basy
Ny teboka iray manontolo
"Mihomehy toy ny akoho", "mijoro eo amin'ny lakandrano", "manaova andro iray" - ireo fehezanteny rehetra ampiasaintsika amin'ny fiainana andavanandro, nefa tsy fantany akory hoe avy aiza izy ireo. Na dia fantatsika aza ny dikan'ny dikan'io, ary ny rehetra dia mahatakatra ny hevitr'izany. Fa raha mijery akaiky kokoa ny famoronana ny fehezanteny ianao, dia matetika izy ireo no mampihomehy na tsy misy heviny intsony amin'izao fotoana izao.
Teny - ny dikany sy ny fiaviany
Maro ireo teny azo atao amin'ny famolavolana maoderina, hanome azy ireo sary mazava. Amin'ny ankapobeny ireo fehezanteny maoderina dia tsy maharesy ary miverimberina foana hatrany amin'ny tany am-boalohany. Fotoana izao hijerena akaiky ny niandohany.
Famaritana mazava fantatra mazava
Ny teny fitenim-paritra dia fitenin'ny rafitra izay tsy azo alaina amin'ny fifanakalozan-kevitra satria ny sary ankapobeny dia tsy mety intsony. Ny "manga ny lanitra" dia tsy afaka ny "mena avy any an-danitra handainga", satria tsy misy olona mahatakatra izany ary tsy misy dikany izany.
Ny teny idioma dia teny maneho sary izay fantatra sy voamarika amin'ny fiteny. Azo jerena amin'ny fiteny hafa koa izany. Mandritra ny "orana" miaraka amintsika, dia ny orana any Angletera "Cat and Dogs" - izany hoe saka sy alika. Amin'ity firenena ity, tsy ho takatsika izany, any Angletera, etsy ankilany, ny iray dia tsy mahatakatra ny tady.
Nangoninay ny fehezanteny mahazatra indrindra ary nahatsapa azy ireo tamin'ny "nify". Eto ianao dia afaka mahita ny tenanao manokana izay misy ny andian-teny iombonana amin'ny ankapobeny.
"Ny fianarana tsara amin'ny fianarana dia ny alpha sy omega hanomboka asa iray," hoy ny renibeny Frederike, mijery an-kitsirano ny fahamaroan'ny zafikeliny. Fantatr'i Frederike fa tsy nanitatra ny lazany izy tao anatin'ny tatitra momba ny herintaona ary namaly valin-kafatra fa ho tsara kokoa izy amin'ny enim-bolana manaraka.
Inona no dikan'ilay hoe "alpha sy omega"?
Avy eo izy dia manontany ny renibeny hoe nahoana ny fianarana amin'ny sekoly dia ny alpha sy omega hanomboka asa. Namaly ny renibeny hoe: "Midika izany ny fiandohana sy ny fiafarana. Raha mandinika tsara ianao any an-tsekoly hatramin'ny voalohany, dia hahavita fianarana tsara ianao ary hianatra izay tianao rehetra. "
Rehefa avy any antenatenany, dia nody i Frederike mba hampisehoana ireo mari-pankasitrahana amin'ny ray aman-dreniny. Mieritreritra foana ny antony nahatonga ny renibeny hanomboka ny A fa ny O kosa amin'ny farany. Angamba tsy afaka mamaky sy manoratra tsara ny renibeny?
Ny renin'i Frederike dia tsy maintsy mihomehy amin'ity fanambaràn'ny zanany vavy ity ary manazava:
"Ny alfabeta grika dia manana ny A for Alpha ho ny taratasy voalohany ary ny O for Omega ho toy ny taratasy farany. Ny fehezanteny dia avy amin'ny fandikana ny Baiboly nataon'i Martin Luther. Ao anatin'izany, hoy Andriamanitra, "Izaho no Alfa sy Omega, ny fiandohana sy ny fiafarana ..." Ireo teny ireo dia avy amin'ny fanambarana avy amin'i John the Mother dia mahafantatra ny filazana hoe: "Izany dia midika fa; Izay manana ny fiandohana sy ny fiafaran'izao zavatra izao, dia ny tompon'ny zavatra rehetra. Noho izany, hita ny herin'ny fahalalana. "
Frederike dia gaga be ary manapa-kevitra fa amin'ny hoavy dia te-hanara-maso ny zava-drehetra izy ary hanatsara ny mari-pahaizana amin'ny sekoliny.
Malahelo i Anke. Te hiditra amin'ny sarimihetsika miaraka amin'ny namany akaiky indrindra izy amin'izao fotoana izao, saingy nanala azy tamin'ny fotoana farany. Stefan, anadahin'i Anke, miezaka mampionona azy. "Avy eo dia mankanesa amin'ny filma rahampitso, fa tsy ratsy izany."
Inona no dikan'ilay andian-teny hoe "teboka manan-danja"?
"Rahampitso dia tsy andro fahatsiarovana ny sinema ary ny sarimihetsika dia mitentina roa euros. Ny teboka dia hoe, tsy manana vola be aho. "
Tsy toe-javatra mahafinaritra, fa mila mihomehy ianao rehefa miteny.
Inona no hevi-dehibe? Miala sasatra ve ny mari-pahaizana? Ary raha izany, inona no ifandraisan'izany amin'ny fanambarana?
Ny fehezanteny dia manondro ny fahamatorana na ny lanjany. Avy amin'i Aristote, izay nahatsikaritra fa mitsambikina kely ny doka kely eo amin'ny atody atody amin'ny atody akoho raha mivoatra ny akoho.
Ity teboka kely ity dia ny fo ary noho izany dia ny taova lehibe indrindra amin'ny akoholahy mitombo. Ary ny teny ao amin'ny fanambarana dia manondro ny zavatra manan-danja indrindra eto.
Idiom Manaova biriky iray
Mieritreritra ny ho ao amin'ny 180
Lohahevitra - Hokaravasina aho
Teny - Mahavariana ny fanorenana
Famaritana alemana mampihomehy amin'ny teny anglisy hatsikana